Easy way to speak English - Myanmar Network
Posted by Myo Myint Kyaw on September 28, 2011 at 19:07 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီကဏ္ဍမှာ ကျနော်တို့သိထားသင့်တဲ့စကားစုတွေ၊ စကားလုံးတွဲတွေကို လေ့လာဖို့အပြင်၊ အစားထိုးရမယ့် နေရာမှာ စိတ်ကူးရှိသလို လိုအပ်တဲ့စကားလုံးတွေကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင် သဒ္ဒါစည်းမျဉ်းလည်း စဉ်းစားစရာ မလိုပဲ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့စကားတွေပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကဲ့ လေ့လာကြည့်ရအောင်ဗျာ…..။
I don’t have time to + (Verb)
မိမိတစ်စုံတစ်ခုကို ပြုလုပ်ဖို့အချိန်မရှိတဲ့ အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာ I don’t have time to ဆိုတဲ့ စကား လုံးတွဲကို ကျက်မှတ်ထားပြီး နောက်က Verb အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတွဲပေးခြင်းဖြင့် မိမိရဲ့ လတ်တလောအခြေ အနေကို ပြောပြနိုင်ပါတယ်။
I don’t have time to explain.
I don’t have time to eat.
ကျွန်တော့်မှာ လေ့ကျင့်ဖို့ အချိန်မရှိဘူး။
I don’t have time to watch my favourite TV Show.
အနှစ်သက်ဆုံး တီဗီကြည့်ဖို့ ကျွန်တော့်မှာအချိန်မရှိဘူး။
I don’t have time to talk.
မိမိမနှစ်သက်တဲ့အရာ၊ မိမိနားမလည်တဲ့အရာ၊ မိမိမလုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေအကြောင်း ပြောချင်ရင်တော့-
ကျနော်တို့သိပြီးသား I don’t ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွဲကို အလွတ်ကျက်ထားပြီး နောက်ဘက်က ကြိယာတွဲလုံး စကားစု (Verb phrase) တွေအမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲ ထည့်ပေးကာ ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဘက်က ပြောင်းလဲထည့်ပေးတဲ့ Verb phrase တွေက V 1 ပုံစံဖြစ်ရပါမယ်။
I don’t understand Spanish.
I promise not to + (Verb)
မိမိက တစ်စုံတစ်ခုကို မလုပ်ဖို့ ကတိပေးပါတယ်လို့ ပြောတဲ့အခါမှာ I promise not to နဲ့ အစချီပြီး နောက်ဘက်ကနေ မိမိစိတ်ကူးအလိုက် Verb အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲထည့်ပေးပြီး သွက်သွက်လက်လက် ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
I promise not to leave without you.
မင်းမပါပဲ မထွက်ခွာဖို့ ငါ ကတိပေးပါတယ်။
I promise not to be so late.
I promise not to hurt your feelings.
ခင်ဗျားရဲ့ ခံစားချက်ကို မထိခိုက်စေဖို့ ကျွန်တော်ကတိပေးပါတယ်။
I promise not to wake you up.
ခင်ဗျားကို အိပ်ရာက မနှိုးဖို့ ကျွန်တော်ကတိပေးပါတယ်။
တစ်ခုခုလုပ်ပေးပါမယ်လို့ ပြောတဲ့အခါမှာတော့ I promise to + (verb) ၊ (သို့မဟုတ်) I promise + (that-clause) ပုံစံနဲ့ ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
That-clause ဆိုတာက that ရဲ့နောက်မှာ ၀ါကျလိုက်တာကိုပြောတာပါ။ လွယ်လွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင် that+subject+verb ပုံစံပါ။
I promise I am telling the truth.
ကျနော် အမှန်တရားကိုပြောဆိုနေတယ်ဆိုတာကို ကျနော်ကတိပေးပါတယ်။
I promise to practices my math.
သင်္ချာတွေကို လေ့လာဖို့ ကျွန်တော်ကတိပေးပါတယ်။
I promise to call you.
ခင်ဗျားကို ဖုန်းဆက်ဖို့ ကျွန်တော်ကတိပေးပါတယ်။
I promise I will tell you.
I promise I will come to your party.
ခင်ဗျားရဲ့ပါတီပွဲကို လာမယ်လို့ ကျွန်တော်ကတိပေးပါတယ်။
I’d rather + (Verb)
တစ်ခုခုလုပ်ရတာကိုပိုပြီးနှစ်သက်တယ်လို့ပြောချင်ရင်တော့ I’d rather+(Verb) ပုံစံနဲ့ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ I’d rather ကို တစ်လုံးချင်းရေးမယ်ဆိုရင် I would rather လို့ရေးရပါမယ်။ would rather ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ကတော့ ပိုကြိုက်တယ် ပိုနှစ်သက်တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ prefer ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ အဓိပ္ပါယ်တူပါတယ်။ နောက်ဘက်က finite ပုံစံဖြစ်တဲ့ V1 ပုံစံလိုက်ရပါမယ်။ ဟိုဟာလုပ်ရတာကိုကြိုက်တယ်။ ဒီဟာလုပ်ရ တာကိုပိုကြိုက်တယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။
I’d rather talk about this later.
ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကို နောက်ကျမှ ပြောပြချင်တယ်။
I’d rather eat at home than go get fast food.
အမြန်မှာယူစားသောက်နိုင်တဲ့ အစားစားကိုသွားပြီး ၀ယ်စားတာထက် အိမ်မှာစားရတာကို ကျွန်တော် ပိုကြိုက်တယ်။
I’d rather stay late than come in early tomorrow.
မနက်ဖြန် စောစောလာတာထက် နောက်ကျပြီးနေတာကို ကျွန်တော်ပိုကြိုက်တယ်။
I’d rather handle the problem myself.
ပြသနာကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းတာကို ပိုကြိုက်တယ်။
I’d rather know the answer.
Permalink Reply by Wah Wah Nu Yin Win on December 1, 2011 at 10:43
I like this post and I think it is good for all. Thanksalot!
Permalink Reply by yinsanhtwe on October 12, 2012 at 13:23
Thank you for sharing.This post is really good.
Permalink Reply by MayMay on October 12, 2012 at 13:44
ွှ့Thankyou so much
Permalink Reply by tinmaraye on October 12, 2012 at 16:14
Permalink Reply by Wint Phyo on October 18, 2012 at 16:43
Permalink Reply by win win maw on October 20, 2012 at 14:22